बालसाहित्य लेखक, अनुवादक र सम्पादक अनुराधासँग ३ प्रश्न | Ketaketi Online
Home » बालसाहित्य लेखक, अनुवादक र सम्पादक अनुराधासँग ३...
बालसाहित्य लेखक, अनुवादक र सम्पादक अनुराधासँग ३ प्रश्न
posted by ketaketionline on Thu, 11/16/2017 - 21:56
केटाकेटी अनलाइन पत्रिकाको यस पटकको ३ प्रश्नमा बालसाहित्य लेखक, अनुवादक र सम्पादक अनुराधासँग कुराकानी गरिएको छ । उहाँ बालसाहित्यमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने परिचित लेखक हुनुहुन्छ । यस पटक पर्सी शनिवार (मंसिर २ गते) विमोचन हुने उहाँको नयाँ कृति ‘मेरो कथाको एलियन’ र उहाँको बालसाहित्य लेखनका नयाँ योजनाबारे हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
प्रश्न १. पर्सी शनिवार (मंसिर २ गते) विमोचन हुने तपाईंको कृति ‘मेरो कथाको एलियन’ बारे केही कुरा भनिदिनुस् न ,
‘मेरो कथाको एलियन’ मेरो पहिलो च्याप्टर पुस्तक हो । मैले यो पुस्तक धेरै बर्ष अगाडि लेखेकी हुँ । त्यो बेला प्रकाशकहरु च्याप्टर पुस्तक प्रकाशन गर्न धेरै रुचाउँनु हुँदैन थियो तर अब यो पुस्तक प्रकाशित भयो, मलाई धेरै खुसी लागेको छ ।
“मेरो कथाको एलियन” विज्ञान सम्बन्धी तथ्यहरु र काल्पनिक कुराहरुको समिश्रणमा तयार पारिएको कथा हो । यो कथा जुनी नाम गरेकी एउटी केटी र उसैको कथाको पात्र एलियनको बारेमा रहेको छ जहाँ जुनीको कथाको पात्र एलियन बास्तविक भएर जुनीको जिन्दगीमा आउँछ र दुबै जना मिलेर धेरै रमाइलो गर्छन् ।
यो पुस्तकमा रहेका सुन्दर चित्रहरु चित्रकार सुमन महर्जनद्धारा बनाइएका हुन् भने पुस्तकको सम्पादन कार्यको जिम्मा नयन राज पाण्डेय दाजुले लिनु भएको थियो र काठमाण्डौ पब्लिकेशनबाट यो पुस्तक प्रकाशित भएको हो ।
प्रश्न २. तपाईं बालसाहित्य किन लेख्नुहुन्छ ? बालसाहित्य लेखनमै लाग्नुको केही विशेष कारण छ कि ?
म बालबालीकाहरुका लागि लेख्ने गर्छु किनभने मलाई यो कार्यमा रुचि लाग्दछ । वास्तवमा उनीहरुका लागि लेख्दै गर्दा म आफ्नो लागि पनि लेखिरहेको हुन्छु । यो एक प्रकारले मैले आफैंले आफ्नो सन्तुष्टिका लागि गरेको कार्य जस्तो पनि हो । जब सानै देखि म पुस्तकको सँसारसँग जोडिएँ तब देखि नै मलाई पुस्तकसँग एक खालको मोह बस्यो । मेरो आमा जो आफैं पनि लेखक हुनुहुन्छ वहाँले मलाई बालसाहित्य लेखन कार्यमा प्रेरित गर्नु भएको हो । सुरु सुरुमा अलि असहज जस्तो भए पनि पछि म लेखन कार्य मै रमाउन थाले । जब मलाई महसुस भयो कि नेपालको बाल साहित्य जगत्मा थुप्रै सम्भावनाहरु छन् र गर्नु पर्ने कार्यहरु पनि थुपै्र बाँकी छन् तब मेरो लेखन प्रतिको उत्प्रेरणा दुईगुणा बढेर आयो ।
आशा छ ,जसरी सानो छँदा पुस्तक अध्ययन गर्दा म रमाउँथे त्यसरी नै मेरो यो पुस्तकले पनि बालबालिकाहरुको खुसी बढाउन सफल हुने छ र बालसाहित्यको लागि यो पनि एउटा योगदान बन्ने छ ।
प्रश्न ३. तपाईंको विचारमा नेपाली बालसाहित्यको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ ? बालबालिकाको पठन संस्कार बढाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
मेरो विचारमा नेपालमा हालको बालसाहित्यको अवस्था एकदमै उत्साहजनक रहेको छ । थुप्रै प्रतिभाशाली लेखक तथा चित्रकारहरु यो क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ र यस्ता प्रकाशकहरु पनि हुनुहुन्छ जसले बाल पुस्तकहरु कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु हुन्छ । तथापि विशेष गरेर बालबालिकाहरुको अध्ययन बानीको बिकासका लागि अझै थुप्रै कार्यहरु गर्नु पर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दछ । यो एउटा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने अभियान हो । अभिवावक, विद्यालय, बालबालिका र बालसाहित्य लेखन तथा प्रकाशनमा क्रियाशील भएकाहरुको संयुक्त प्रयासबाट मात्र यो सम्भव छ । र यस्तो पवित्र अभियानको सुरुवात असल बालसाहित्य प्रकाशनबाटै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।